ကိုဗစ်ကာလမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ လူရွှင်တော်တွေအတွက် အလှူငွေ (၁၀) သိန်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ နေတိုး – CharTake
chartake | September 23, 2020 | Cele News | No Comments
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ … သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ နေတိုးဟာဆိုရင် ပြည်သူချစ် စွယ်စုံရ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သလို ကိုဗစ်အကာလမှာလည်း အလှူအတန်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းနေပါတာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်မှာပါ ။
ဒီနေ့မှာတော့ အကယ်ဒမီ နေတိုးဟာ အနုပညာလောကသားချင်း တွေဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်တွေအတွက် အလှူငွေ (၁၀) သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလမှာ အဆင်မပြေတဲ့ လူရွှင်တော် တွေအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူငွေကို ဒိန်းဒေါင်းက လက်ခံရယူခဲ့ပြီး သူရဲ့ လူမှု့ကွန်ယက်မှာ အခုလို မျှဝေထားပါတယ် ။
“ ကိုဒိန်းဒေါင် အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့? ကျွန်တော်ကတော့ အဆင် ပြေပါတယ် ။ ဈေးရောင်း ဆိုက်ကားနင်း ကယ်ရီဆွဲနေတဲ့ လူရွှင်တော်တွေ အဆင်မပြေကြဘူး ကိုနေတိုးရေဆိုတော့? ကျွန်တော်လှူ ပေးပါ့မယ်တဲ့ ။ ဆယ်သိန်းမတည်ပြီး လှူလိုက်တယ်ဗျာ အကယ်ဒမီ ကိုနေတိုးတို့ မိသားစုကို သာဓုခေါ်ပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ(သာဓုသာဓုသာဓု) ပါ ” ဆိုပြီး နေတိုးရဲ့အလှူကို မျှဝေထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလဲ ကိုဗစ်ကာလမှာ ခက်ခဲနေတဲ့ လူရွှင်တော်တွေအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုးရဲ့ အလှူလေးကို သာဓု ခေါ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ အချိန်ပေး ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်နော် ။
Unicode … ကိုဗဈကာလမာ အဆငျမပွတေဲ့ လူရှငျတျောတှအေတှကျ အလငှေ (၁၀) သိနျး လဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ အကယျဒမီ နတေိုး
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ … သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ နတေိုးဟာဆိုရငျ ပွညျသူခဈြ စှယျစုံရ အနုပညာရငျတဈဦး ဖွဈသလို ကိုဗဈအကာလမာလညျး အလအတနျးတှကေို တတျနိုငျသလောကျ လဒါနျးနပေါတာ အားလုံးအသိပဲ ဖွဈမာပါ ။
ဒီနမေ့ာတော့ အကယျဒမီ နတေိုးဟာ အနုပညာလောကသားခငျြး တှဖွေဈတဲ့ လူရှငျတျောတှအေတှကျ အလငှေ (၁၀) သိနျး လဒါနျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုဗဈကာလမာ အဆငျမပွတေဲ့ လူရှငျတျော တှအေတှကျ လဒါနျးခဲ့တဲ့ အလငှကေို ဒိနျးဒေါငျးက လကျခံရယူခဲ့ပွီး သူရဲ့ လူမကှနျယကျမာ အခုလို မဝြထေားပါတယျ ။
“ ကိုဒိနျးဒေါငျ အဆငျပွရေဲ့လားတဲ့? ကြှနျတျောကတော့ အဆငျ ပွပေါတယျ ။ ဈေးရောငျး ဆိုကျကားနငျး ကယျရီဆှဲနတေဲ့ လူရှငျတျောတှေ အဆငျမပွကွေဘူး ကိုနတေိုးရဆေိုတော့? ကြှနျတျောလ ပေးပါ့မယျတဲ့ ။ ဆယျသိနျးမတညျပွီး လလိုကျတယျဗြာ အကယျဒမီ ကိုနတေိုးတို့ မိသားစုကို သာဓုချေါပေးကွပါဦး ခငျဗြာ(သာဓုသာဓုသာဓု) ပါ ” ဆိုပွီး နတေိုးရဲ့အလကို မဝြထေားပါတယျ။
ပရိသတျကွီးလဲ ကိုဗဈကာလမာ ခကျခဲနတေဲ့ လူရှငျတျောတှအေတှကျ လဒါနျးခဲ့တဲ့ နတေိုးရဲ့ အလလေးကို သာဓု ချေါပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ အခြိနျပေး ဖတျရပေးခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးကြေးဇူး တငျရပါတယျနျော ။
ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာများအတွက် အသက်ရှုစက်များ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အေးမြတ်သူ
ဆေးအကူအနေနဲ့လုပ်အားပေးရင်း လူနာတွေကိုဆေးဝါးဒါနအခမဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နီနီခင်ဇော်
စပွန်ဆာရှိလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ် စပွန်ဆာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေကြားလာတဲ့ အလှမယ်သင်းသင်
သရုပ်ဆောင် ဗေလုဝ ကွယ်လွန်သည်ဆိုတဲ့ သတင်းမှာ သတင်းအမှားသာဖြစ် … ဦးဗေလုဝ နေကောင်း ကျန်းမာလျှက်ရှိပါသည်